१९ वर्षीया किशोरीको दुईवटा यो”नी – List Khabar
Home / रोचक / १९ वर्षीया किशोरीको दुईवटा यो”नी
१९ वर्षीया किशोरीको दुईवटा यो”नी
admin August 26, 2021 रोचक Leaveacomment 311 Views
एजेन्सी । एक किशोरीको दुईवटा यो नी भेटिएको छ । बेलायत गिलिङघाम केन्टस्थित १९ वर्षीया किशोरी मोली रोज टेलरमा म हिनावारी समस्या थियो ।
महिनावारीमा समस्या भएपछि उनी अस्पताल गएकी थिइन् । डाक्टरले उपचारको क्रममा मोलीको दुईवटा यो नी भएको पत्ता लगाएको हो ।
९ वर्षको हुँदादेखि उनले महिनावारी निकै पी डादा यी भएको बताउँदै आएकी थिइन् । चिकित्सकले भने यस घ ट नालाई अनौठो भनेका छन् । उनीहरुका अनुसार मोली युटेरस डिडेल्फीबाट पी डित छन् ।
डाक्टरहरू उनमा वास्तवमै दुईवटा यो नी, ग र्भ र ग र्भाशयहरू छन् भनी पत्ता लगाउँदा छक्क परेका थिए ।
प्लास्टिक सर्जरी गरेर सुन्दरता गुमाएका बलिउड अभिनेत्रीहरु
एजेन्सी । बलिउड नायिकाहरु अभिनय मात्र नभई सुन्दरताको कारण पनि चर्चामा हुने गर्छन्। फेसन, सुन्दरता र अभिनयले गर्दा नै बलिउड अहिलेको स्थानमा पुगेको हो।
बलिउडमा रहेका नायिकाहरु विश्वकै सुन्दर नायिकाहरुको सूचीमा पर्ने गर्छन्। आकर्षक आँखाले सुन्दरतालाई सिधै परिस्कृत गर्छ। फिल्म नगरीमा जे देखाउन सकियो त्यो नै बिकाउन सकिन्छ। यहाँ सुन्दरताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ।
त्यसैले त बलिउड नायिकाहरू आफूलाई अरूभन्दा सुन्दर देखाउन अनेक तौरतरिका अपनाउने गर्दछ। बलिउडका अधिकांश नायिकाहरूले प्लास्टिक सर्जरी गरेर आफूलाई बेग्लै देखाउन खोज्छन् तर प्लास्टिक सर्जरी सधैं सफल हुन्छ भन्न सकिन्न।
कतिपय अवस्थामा यस्तो सर्जरी बिग्रेर नकारात्मक असर पनि पर्ने गर्दछ। आज हामी यहाँ प्लास्टिक सर्जरी फेल भएर कुरुप देखिने बलिउड नायिकाहरूको बारेमा चर्चा गर्ने छौ।
श्रीदेवी आज हामीसामु छैनन् तर उनको अभिनय र नृत्यलाई हामी कसैले पनि भुल्न सक्दैनौं। श्रीदेवीको जन्म १३ अगस्ट १९६३ मा तमिलनाडुमा भएको थियो। उनले आफ्नो पहिलो करियरको शुरुवात चार वर्षको उमेरमा तमिल फिल्म ‘कन्धन करुणई’ मा बालकलाकारबाट गरेकी थिइन्। सबैको मुटुमा बस्न सफल श्रीदेवीले आफ्नो चुलबुले अन्दाजमा सबैको ध्यान तानिन्। उनी यति सुन्दर थिइन्, मानिसहरू उनको तारिफ गरेर थाकेनन्।
पछिल्लो समय उनले ओठ र नाकको सर्जरी गरेकी थिइन्। यसले उनको सुन्दरतालाई निखार्नुको साटो अझै बिगारेको थियो। भनिन्छ, सर्जरीका कारण उनलाई हाँस्नमा पनि निकै समस्या हुने गर्दथ्यो।
Previous भोलि भदौ १० गते बिहिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस राशिफल !
Next श्रीमानलाई देखाउन अर्को बिहे गर्न चाहन्छु !